हाम्रो चाहना पारदर्शी खेलकुद प्रशाशनको हो | जनसवाल जनसवाल
२०७५ फाल्गुन ४, शनिबार , नेपाली समय : ०९:५८ pm
हाम्रो चाहना पारदर्शी खेलकुद प्रशाशनको हो
२०७४ माघ २, मंगलबार ०८:१२ AM
कालीबहादुर घर्ती मगर
अखिल नेपाल खेलकुद महासंघ
कालीबहादुर घर्ती मगर, लामो समय देखि नेपालको बामपन्थी राजनितीमा सक्रिय खेलकर्मी हुन् । मगर हाल अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका महासचिव छन् । आफ्ना कुरामा अडिग रहने स्वभावका प्रस्ट बक्ता कालीबहादुरसंँग राजनिती र खेलकुदका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप :
अहिले सबैभन्दा चर्चाको विषय नेपालमा भएको बामगठबन्धन र दुइ पार्टी विचको एकता नै हो । तपाईहरु खेलकुद संगठनका नेतृत्वकर्ताहरु पनि अब एउटै सस्थामा आबद्ध हुदै हुनुहुन्छ । यसले ब्यबस्थापनमा कुनै समस्या हुदैन ?
पहिलो कुरा त आम नेपाली नागरिक र जनजीविकाको सवालमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर राजनितीमा होमिएका कम्युनिस्टहरु विभाजित भएका कारण हाम्रो समाज पछाडी धकेलिएको साँचो हो । कम्युनिस्ट एकता पछि समाजका हरेक पाटाहरु विकासको क्रममा अघि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी अघि बढ्दा हामी विचको ब्यबस्थापनको कुरा गौण हो जस्तो लाग्छ ।
यसबारेमा केही सल्लाह भएको छ कि छैन?
जुन समयमा पार्टी एकताको चर्चा चल्यो । त्यो समयमा हामी निर्वाचनमा होमिएका थियौ । हामी बामगठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरुलाई विजय गराउन नै सक्रिय रह््यौ । निर्वाचन सकिए पछि कुन तहबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्नेकुरा पार्टी नेतृत्वले नै तय गर्ने छ । हामी कार्यकर्ता भएको कारण नेतृत्वको कुरा शिरोधार्य गर्ने हो । अखिल नेपाल खेलकुद महासंघमा आबद्ध मलगायत सबै साथीहरुको विशेषता के हो भने हामी आफ्नो खेलमा पनि जिम्मेवार ब्यक्ति हौ । ब्यबस्थापकीय रुपमा र प्राबिधिक रुपमा पनि । यसकारण हाम्रो ब्यबस्थापन कठिन विषय पनि होइन र नेतृत्वका लागि चिन्ताको विषय पनि होइन ।
अब खेलकुदमै तपाईहरुको भुमिका के हुन्छ ?
हाम्रो दुइ भुमिका छन् । पहिलो त हामी खेलकर्मी हौ । हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी छ । यो जिम्मेवारीमा इमान्दारीपूर्वक लाग्ने भन्ने नै हो । दोस्रो हाम्रो सामाजिक र राजनितीक जिम्मेवारी पनि छ । तर, सबैभन्दा साँचो के हो भने जात, धर्म, लिंग, बर्ण र बर्ग कुनै पनि आधारमा मान्छे मान्छे विच भेदभाव गर्न पाइदैन भन्ने मान्यता खेलकुदको पनि हो । यसै मान्यता हामीले बोकेको राजनितीको पनि हो । भेदभाव र पक्षपातविहिन दुनियाँका लागि लडेका हामी खेलकुदमा पनि मान्छे सीप र मिहेनतको आधारमा मात्र सफल हुने अबस्थाको सृजना गर्न लागि पर्छौ । केही समयमै हामी सफल पनि हुने छौ ।
सफल हुने आधार नी ?
सफल हुने आधार नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । विगतमा जे भए, ती विगतमै भए । हाम्रो चाहना पारदर्शी खेलकुद प्रशाासनको हो । यसमा हामी लागी पर्छौ । यसका लाग सहज वातावरण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
तपाइको प्राथमिकता खेलकुद हो की राजनिती ?
मैले भनेनी हामी हिडेको राजनितीको बाटो र खेलकुदको मुल मर्म एउटै हो । भेदभाव रहित समाजको निमार्ण , मिहेनतको महत्व र सीपको विकास । मेरा प्राथमिकता पनि यीनै हुन् । जुनबाटोको सक्रियताले समाजका यी पाटाका योगदान गर्न सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसमै बढी सक्रिय हुन्छु ।
खेलकुदकै सबैभन्दा ठूलो समस्या के देख्नु भएको छ ?
हामी बर्षौ देखि एकखाले सस्कारमा हुर्कीयौ । खेलकुद क्षेत्रमा पनि त्यही सस्कार देखियो । जुन हामीले भत्काउन सकेनौ । “ ट्रेनहार्ड, लेबर हार्ड र बि सक्सेस” भन्ने कुरामा संसारको खेलकुद हिड्यो । हामी यसमा चुक्यौ । सामान्य उपलब्धीमा रमाउने र यसलाई मार्केटिङ गरेर फाइदा लिने प्रचलन बढ्यो । खेलकर्मी पनि चुकेकै हो । ब्यबस्थापन पनि । हामी न त इमान्दारिताको विकास गर्न सफल भयौ । नत महत्वाकांक्षाको । हामी समान्य सपनामा अल्झिन थाल्यौ । सफल हुन त ठूला सपना देख्नै पर्छ । धेरै मिहेनत गर्नै पर्छ । ठूलो त्याग पनि चाहीन्छ । हामी यी कुरामा चुकेकै हो । यो विगत देखिको संस्कारको कारण हो । नेतृत्वनै परिणाम होइन चाकडी खोज्ने भयो । केहीहदसम्म राजनितीकर्मी पनि चुकेकै देखियो । केही गर्ने भन्दा पनि यहाँबाट केही पाउने लालसा पनि बढी देखियो । यी सबै अन्त्य हुनै पर्छ । हामी यसमा प्रतिबद्ध पनि छौ ।
तपाईहरुको खेलकुद संगठनको नेतृत्व कस्तो हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
को हुनुपर्छ भन्ने गौण हो । तर, खेलकुदलाई जिवन ठान्ने मान्छे हुनु पर्छ । त्यो चाहिं महत्वपूर्ण हो । खेलकर्मीको साथी हुने मान्छे होस, शोषक होइन । समानताको मुद्धामा जिवन अर्पीन तयार हुदै राजनीतीमा होमिएको हाम्रो विगत हो । मैले अघि पनि भने खेलकुदको मुल मान्यता भनेको भेदभावरहित दुनियाको कल्पना र मिहेनतको सम्मान हो । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने ठूला शक्तिको विरुद्ध मोहम्मद अली, जोसे ओवेन्स र इथोपियाका म्याराथन धाबकले सफलता पाए ।
पहिलो अन्तराष्ट्रिय पदक जित्ने नेपाली कुनै घरानिया होइनन् । दोलखा मकैवारीका सामान्य नेपाली जित बहादुर केसी हुन् । नेपालको एथलेटिक्स सामान्य घरमा जन्मेर हुर्किएर चौधरीले नै धेरै थेगेको हो । मैले भन्न खाजेको के हो भने प्रकृतिले भेदभाव गरेको छैेन । हरेक ब्यक्तिमा एकखाले क्षमता हुन्छ । मानिस आफैले उब्जाएको भेदभावको विरुद्धमा हामी राजनितीमा लाग्यौ । खेलकुदको मान्यता पनि यही भेदभावरहित संसार हो । तर, नेपालको खेलकुदमा यो लागू भएन । राजा रजौटा संस्कार यथाबत रह््यौ । यो संस्कार नभत्किएसम्म हामी आम नेपाली शोषित र केही अभिजात बर्ग शोषक हुने निश्चित हो । खेलकुद आम नेपालीको हुनुुपर्छ भन्ने चेतना भएको, विगतदेखि हालसम्म रहेको रजौटा सस्कारलाई भत्काउने चाहना भएको र खेलकुदमै समर्पीत भएको ब्यक्तिकै नेतृत्वमा खेल संगठन रहनुपर्छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय म्युजिक अवार्ड २०१९’ सम्पन्न, स्मृति गौतम र अमृत खाती उत्कृष्ट
अपहरणको नाटक गरेर अभिभावक संग पैसा ठग्ने तीन युवक पक्राउ
राष्ट्रपतिद्वारा अख्तियार आयुक्तको राजीनामा स्वीकृत
भारतमा १७९ नेपाली अलपत्र नेपाल ल्याउन पहल
व्यापार घाटा सन्तुलन गर्दै निर्यात प्रर्वद्धनमा जोड दिनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी